China Escalator fivarotana fitaovana an'ny tranokala 5 orinasa sy mpamatsy | Hongli
Ny fifehezana elektrika
Misy fomba roa. Ny modely voalohany dia modely mahazatra, ary ny fomba faharoa dia ny fomba fikojakojana. Fomba mahazatra izany rehefa ampidirina avokoa ireo fonosana tsy fanamboarana ny efi-trano ambony sy ambany. Ny escalator dia manomboka mividy ny staff misy lakile rehefa tsy misy iray ao. Ny mpiasa dia manindry ny bokotra fijanonana hampijanonana ny escalator. Rehefa voaray ny mari-pahaizana lakile dia manomboka sy haingam-pandeha. Esory ny iray amin'ireo kitapo tsy fanamboarana ary ampidiro ao anaty fomba fanamboarana ny boaty fanamboarana. Ny mpampiasa dia afaka mampiasa boaty fanamboarana hanokafana ny tohatra. Tsy afaka manao afa-tsy boaty serivisy iray ao amin'ny efitrano milina ambony sy ambany. Raha atambatra boaty serivisy roa ny fotoana iray dia tsy azo atao ny manomboka ny fiakarana.
Pedal dia afaka mampiasa alloy alloy alloy die cast na stainless steel cascade. Satria manana lanja maivana, avo tsara ary tsara tarehy. Ary ny rihana mandeha dia vita amin'ny polyurethane avo be hery.
Ny rojom-pandrosoana dingana dia manamboatra loko hosorohana mba hisorohana ny harafesina. Ny fizarana mirona dia tohanan'ny takelaka fanohanan'ny lalamby afovoany. Ny takelaka fanohanan'ny lalamby afovoany dia vita amin'ny fitaovana CNC. Ny lalamby afovoany dia vita amin'ny mombamomba azy, antivotra anti-harafesina.
Fitaovana fametahana fiara sy fihenjanana daholo. Ny fantsom-pandeha fiara dia mitaky ny nify fitafy. Ny motro mamatotra dia tokony hitovitovy. Ary ny birao apronona dia mitana ny anjara asa fisorohana ny devià koa. Izy io koa dia miasa amin'ny lalamby mpanohitra, manakana ny dingana tsy hikororoka sy hihoatra.